Shirkii iyo Dhismahii ururka DYSE Faraca Canada oo guul ku dhamaaday iyo Taageero ay u Direen XDSHSI. - Cakaara News
Shirkii iyo Dhismahii ururka DYSE Faraca Canada oo guul ku dhamaaday iyo Taageero ay u Direen XDSHSI.
Edmonton(CN) Jimce Feb-21-2015. Maalinimadii Axada ahayd oo bisha February ku beegnayd 15, 2015 ayaa ururka dhalinyarada ee DYSE ee faraca Canada waxay shir si heer sare ah loo soo agaasmiy ku qabteen magaalada Edmonton ee gobalka Alberta shirkaas oo ahaa xogwaran iyo doorashadii masuuliyiintii DYSE ee laanta Canada.
doorashada ka hor ayaa warbixin xog waran iyo Filim Documentary oo laga soo duubay DDSI ay Jaaliyadu ku daawatay kaas oo ay aad uga heleen waxaana ka warbixiyey Gudoomiyaha DYSE ee Canada Mudaane Mohamud omar Abdi ( mirqaan) oo asagu dhawaan ka soo laabtay DDSI, booqashana ku tagay Gobolka Jarar iyo caasimada DDSI ee Jigjiga.
mudane Mohamud omar Abdi ( mirqaan) ayaa warbixin aad looga helay siiyey Jaaliyada warbixintaas oo ku saleysneyd xaqiiqdii uu ku soo arakay dhulka hooyo sida horumarka baaxada weyn eek a jira guud ahaanba 9 gobol ee deegaanka, sugida Amaanka oo meel lagu meteli karo ayasan ka jirin Africa,dadaalka waxbarashada oo aan la soo koobi Karin, guulaha laga gaadhay caafimaadka oo wax aad loogu farxo ah, wadooyinka waaweyn ee isku xidhaya Gobolda iyo wax soo saarka Beeraha. warbixintaas oo aad loogu diirsaday ka dib ayaa waxaa la guda galay dhismahii ururka iyo madaxdii hogaamin lahayd DYSE,Canada.
waxaana gudoomiye loo dioortay mudane Mohamud omar Abdi (Marqaan) 1- Camaar Abdullahi Ali oo loo doortay xiriiriyaha guud ee jaliyada DDSE west Canada 2- Abdullahi Ali Mahmud gudoomiyaha jaliyada Edmonton 3- Abdimalig Mohamed Gudoomiyaha jaliyada DDSI ee grande prairie 4- Abshir haji Abdi gudoomiye ku xigeenka DYSE.
Natiijadii doorashada ka dib ayaa masuuliyiintii DYSE waxay balan qaadeen taageerada iyo isgarabtaaga X.D.SH.S.I iyo Xukuumada DDSIi waxayna aad ugu bogaadiyeen hanaanka suuban iyo fikirka waafiga ah ee uu mudane Cabdi Maxamuud Cumar ku hogaamiyey DDSI asaga oo ay garbahiisa yihiin guud ahaanba Xukuumada DDSI.
ugu danbayntii ururka ayaa taageeray bisaylka iyo kartida xisbiga talada deegaanka haya uu ku talaabsaday islamarkaana markii ugu horaysay abid lagu soo daray Dumar saaxada siyaasad hogaamineed ee Deegaanka musharaxiintana ka mid yihiin 35%kiiba Dumar.